EFA ATOMOTRA NY FAHATONGAVAN’I DADA – MyDago.com aime Madagascar
Anisan’ny hametrahana ahiahy hoy ny Cst Rakotovazaha Olivier androany teny Magro Behoririka ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny « logiciel » ampiasaina amin’izany hoy izy dia avy any Mauritania ary manampahaizana avy no manao azy. Izay nanao fifidianana tsy nahomby tany hoy Olivier no manao izany eto amintsika. Ho hitantsika izay hanaovany azy fa tsy hampahafirin’ny tamin’ny 2002 io. Ny fanaovana ny lisitry ny mpifidy hoy izy dia mbola endrika hisian’ny halabato amin’ny alalan’ny biometrika. Ny zavamisy dia tao anatin’ny 10 taona dia tsy nihetsika ny isan’ny mpifidy raha teo amin’ny 7 tapitrisa teo eo ho eo kanefa ankehitriny dia lasa 10 tapitrisa. Ny halabato sy ny mpanongam-panjakana hoy Olivier dia systematika. Misy olona teo amin’ny fitondrana teo aloha lasa ao amin’io fitondrana io ankehitriny. Rehefa tsy hitany hoy izy ny hisakanana ny filoha Ravalomanana dia manomana izany izy ireo. Noho izany dia aoka isika ho mailo hanaramaso ny manodidina antsika. Ny Ct Rarison Hilarion kosa dia nilaza fa efa atomotra ny fahatongavan’I dada. Eto isika hoy izy no miandry azy ary rah any faniriako dia ny hiaraka hanao anniversaire aminy. Nambarany ihany koa fa isika rehefa manao valandresaka ho an’ny mpanao gazety dia am-pilaminana. Mpanongam-panjakana hoy izy ireny nanao valan-dresaka ireny. Mampalahelo raha ireny no nampianarina tany amin’ny academia miaramila.
4 réflexions sur « EFA ATOMOTRA NY FAHATONGAVAN’I DADA »
HAZO HATOKISANA VVE NY RESAKY I RAKOVAZAHA ITY ,EFA ELA IO RANGA IO NO MIRESAKA TAHAKA IO.
tena namana dit :
18 novembre 2012 à 8 h 54 min
tsy misy atokisana intsony ireo mpitarika ao amin’ny magro ireo na iray aza, efa ho 4 taona izao no nihainoako kabary fa ny omaly ihany no rapitso, sady ny tsy fantatry ny mpitona anie dia ny hoe mifampiresaka mialoha ireo hoe inona indray ny lainga afafy amin’ny kabary rehefa avy eo,ny firesahana amin’i rajoelina moa manginy fotsiny
ohatra ny mamahan-dalitra marina ianareo izany. Tsy aleho ve aloha manao hetsika hafa misy ankony vao milaza ny faniriana ho zava-misy ?
Voafahan-dalitra izahay aùin’ny foza dia voafahan(dalitra koa ve eto amin’ny magro ? izany ve dia mba rariny ?
Aza mba manao an’izany!!!misy mpitarika tena azo lazaina ho
mafana fo mihintsy eo fa aza izay saonjo lo no jerena , azoko fa leo ianareo
fa tsy mora koa ny mamorona zavatra ho lazaina HIZARANA ilay zavamusy eo.
Ary mino aho fa misy koa aza efa tojo hakiviana indraindray @ hataon’ny sasany ao @ MPITARIKA ao.
misy mpitari-bato vilam-bava mantsy ao, Rakotovazaha. O dia anisany mbola azo2 noho ny sasany kosa
aloha amiko e!!fantatra @ voany ihany ny hazo …
Précédent Article précédent : AntokoTEZA : TSY HAHAVAHA OLANA IO FIFIDIANANA IO
Suivant Article suivant : VOT : MITAKY NY HAMPIHARANA NY TONDROZOTRA